Saddex-xagalka Horumarinta Webka | Martech Zone
Saddexagalka Horumarinta Webka
Arbacada, Nofeembar 6, 2013 Arbacada, Nofeembar 6, 2013 Douglas Karr
Dhammaan qandaraasyada aan la leenahay macaamiisheennu waa hawlgal bille ah. Marar aad u yar ayaannu ku raad-joognaa mashruuc go'an oo waligoodna kama ballan-qaadno waqtiga. Taasi cabsi ayey u noqon kartaa dadka qaar laakiin arinta ayaa ah in ujeedku uusan noqon taariikhda la sii daayo, waa inay noqotaa natiijooyinka ganacsiga. Shaqadeenu waa inaan helno macaamiisheena natiijooyinka ganacsiga, ma ahan inaan qaadno dariiqyo si aan u sameyno taariikhaha bilaabista. Maaddaama Healthcare.gov ay wax baranayso, taasi waa waddo u horseedi doonta rajooyin la seegay.
Si loo iskudayo loona ilaaliyo macaamiisha mashaariicda waqtigeeda, waxaan u kala saareynaa shuruudaha waa inay lahaadaan (qancinta natiijooyinka ganacsiga) oo ay fiican tahay inaan helno (Ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah). Sidoo kale waligeen jadwal uma qabano waqtiga la sii deynayo maadaama aan ognahay inay had iyo jeer jiri doonaan isbedello loo baahan yahay
Robert Patrick waa agaasimaha guud Shaybaarada PhD, hay'ad naqshadeysa, dhista oo soo saarta bogagga internet ee shirkado badan oo Fortune 500 ugu sarreeya. Robert wuxuu isha ku hayey dhibaatooyinka ay soo food saartay Healthcare.gov wuxuuna keenay 5 sababood oo muhiim u ah furitaankii fashilmay.
Weligaa, weligaa ha ku xadgudbin Waqtiga, Qiimaha & Muuqaalka Xeer deji. Ka fikir tan sidii saddex-xagal, waa inaad doorataa hal dhibic inaad ahaato go'an iyo labada kale doorsoomaha. Adduunyada, wax kasta waa la abuuri karaa inta ay waqti iyo lacag ugu filan yihiin. Si kastaba ha noqotee, qof kasta oo dhisaya codsi shabakadeed waa inuu doortaa, xagga hore, taas oo ah mudnaanta ugu sareysa. Tani waxay dejineysaa codka iyo diiradda saarida sida mashruuc loo bilaabi lahaa. Tusaale ahaan,
Miyay tahay in la bilaabo kaliya marka sifooyinka gaarka ah la sameeyo (lacagta iyo waqtiga waa isbedbeddelaan).
Haddii si dhakhso leh loo bilaabo (lacagta iyo astaamaha waa isbeddelaan).
Miyay tahay in lagu bilaabo miisaaniyad maskaxda ku haysa (waqtiga iyo astaamaha waa isbeddelaan).
Ku bilaabaya khadka dhammeystirka maanka ku hayn halkii safka laga bilaabi lahaa. Codsiyada websaydhka waa in loo arkaa mashruuc ahaan doona bilow ka dibna isbeddel. Dhisida waxa muhiimka ah iyo waajibka u ah maanta iyadoo maskaxda lagu hayo koritaanka iyo horumarka had iyo jeer way ka fiicantahay dhismaha iyadoo ujeedadu tahay dhameystirka barta bilowga.
Iibiyeyaal aad u tiro badan ku lug leh. Waxaa lagu soo warramey in websaydhka Obamacare ay ku dhowaad 55 iibiyeyaal ku lug lahaayeen. Ku darista iibiyeyaal badan mashruuc kasta waxay noqon kartaa simbiriirixan. Waxaad kudhowaad damaanad qaadi kartaa inay jiri doonaan arrimo laxiriira feylka feylka, iskuduwaha feylasha farshaxanka, iskhilaafka fikirka farshaxanka, ka tagida mashruuca, liistaduna way sii socotaa. Bal qiyaas haddii aan yeelan lahayn 55 senetar oo mid walba loo xilsaaray xallinta qayb ka mid ah dhibaatada guud.
Dhismaha Macluumaadka aan si dhab ah loo qaadan. Badanaa, wakaalado waaweyni waxay waydiin doonaan waratada inay soo gudbiyaan dalab ku saabsan RFP isla markaana ay si buuxda uga boodaan nidaamka Dhismaha Macluumaadka oo u boodaya midig horumarka iyadoo aan la fahmin ama lagu heshiin baaxadda. Tani waa wax weyn, fool xun, waqti lumis, lacag lumis, qalad. Aad ayey qiimo ugu leedahay dhisida inta badan codsi ee aad horey u sii wadi karto oo aad u diyaar garowdo inaad noqoto mid deg deg ah oo dabacsan oo ku saabsan waxyaabaha aan horay loo sii saadaalin karin ka hor intaadan bilaabin barnaamijkeeda (tani waxay la mid tahay dhisida guri bilaa qorshe ah). Iibiyeyaasha waxaa loogu talagalay inay ka dhammaadaan miisaaniyadda oo ay bilaabaan inay jaraan dhinacyada haddii aan tan si sax ah loo samayn.
Waqti ku filan looma hayo Hubinta Tayada. Waa iska cadahay in tani ay ahayd hoos u dhac weyn oo ku yimid bilaabida HealthCare.Gov. Waxay ka shaqeynayeen taariikh bilaabid adag (waqtigu waa doorsoomaha go'an ee saddexagalka kiiskan) iyo astaamaha iyo miisaaniyadda waxay ahayd in wax laga beddelo si ay ula kulmaan taariikhda daahfurka oo leh waqti loogu talagalay Hubinta Tayada saxda ah ee lagu dhisay qorshaha. Tani waa qalad muhiim ah waxayna u badan tahay inay dad badani shaqooyinkoodii ku waayeen.
Tags: qiimahaguuldareysigamuuqaaladakhadka dhammeystirkadaryeelka caafimaadkadhismaha macluumaadkahubinta tayadasafka bilawgawaqtigasaddexagalIibiyeyaasha
Warbixinta 2013 ee SoDA - Volume 2
Suuqgeeyayaasha B2B Waxay Guul Kahelaan Suuqgeynta Mawduuca